နနွိုင်း အာကွီနို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် - ဝီကီပီးဒီးယား
နနွိုင်း အာကွီနို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်
နနွိုင်း အာကွီနို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် (Ninoy Aquino International Airport) (NAIA)သည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ မနီလာမြို့နှင့် မက်ထရို မနီလာတို့၏ အဓိကလေဆိပ်ဖြစ်သည်။ ယခင်က မနီလာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်အဖြစ် သိကြသည်။ ပါစီနှင့် ပရာစပ်တို့နှင့် နယ်စပ်မျဉ်းအနီး မနီလာမှ တောင်ဘက် ၇ကီလိုမီတာအကွာ၊ မာကတီမြို့၏ အနောက်တောင်ဘက်တွင် တည်ရှိသည်။ဤလေဆိပ်မှာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသို့ လာကြသည့် ခရီးသွားများ၏ အဓိက လေကြောင်း တံခါးဖြစ်သည်။ ဖိလစ်ပိုင် အဲအေးရှား၊ Cebgo၊ ဆီဘူး ပစိဖိတ်၊ PAL Expressနှင့် ဖိလစ်ပိုင် လေကြောင်းလိုင်းတို့၏ မိခင်ဌာနလေဆိပ်ကြီးဖြစ်သည်။ ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊မနီလာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် အာဏာပိုင်အဖွဲ့က ထိန်းချုပ်သည်။ 
နနွိုင်း အာကွီနို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်မှာ တရားဝင်အားဖြင့် မနီလာ၏ ဝင်ပေါက်ဖြစ်သော်လည်း လက်တွေ့တွင် ကလပ်ခ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကပါ မြို့၏ ဝင်ပေါက်ဖြစ်လာသည်။ ကလပ်ခ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်မှာ ပန်ဖန်ခတွင် တည်ရှိသည်။ ကလပ်ခ်လေဆိပ်မှာ မနီလာ လေဆိပ်ထက်စာလျှင် လေယာဉ်ဆင်းသက်ခ နည်းပါးသည့်အတွက် တန်ဖိုးနည်း လေကြောင်းလိုင်းများစွာ ဆင်းသက်ကြသည်၊ဖိလစ်ပိုင် လွှတ်တော်အမတ် Benigno "Ninoy" Aquino, Jr.သည် ၁၉၈၃ခုနှစ်တွင် လေဆိပ်၌ လုပ်ကြံခံခဲ့ရသည်။၎င်းအား ဂုဏ်ပြုရန်အတွက် လေဆိပ် အမည်ပြောင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၂၀၁၇ခုနှစ်တွင် လေဆိပ်အဆောက်အအုံအားလုံး၏ ခရီးသည် ဝန်ဆောင်မှုမှာ ၄၂၀၂၂၄၈၄ဖြစ်ကာ ယခင်နှစ်ကထက် ၅.၉၆%ပိုတိုးကာ စံချိန်သစ် တင်နိုင်ခဲ့သည်။
၂ လေဆိပ် အဆောက်အဦးများ
၂.၁ လေဆိပ် အဆောက်အဦး ၁
၂.၂ လေဆိပ် အဆောက်အဦး ၂
၂.၃ လေဆိပ် အဆောက်အဦး ၃
၂.၄ လေဆိပ် အဆောက်အဦး ၄ (ပြည်တွင်း ခရီးစဉ်များ အဆောက်အဦး)
၃.၁.၁ တတိယ ပြေးလမ်း စီမံကိန်း
၄.၁ အဆောက်အဦးများအကြား သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
၄.၂ ပြင်ပ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
၅.၁ ခရီးသည် ဝင်ရောက်မှု
၅.၂ ကုန်ပစ္စည်း ဝင်ရောက်မှု
မနီလာမြို့၏ မူလလေဆိပ်ဖြစ်သော Grace Park Airfieldကို ၁၉၃၅ခုနှစ်တွင် ကလူကန်မြို့၌ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ထိုလေဆိပ်မှာ မြို့၏ ပထမဆုံး စီးပွားရေးဆိုင်ရာ လေဆိပ်ဖြစ်သည်။၁၉၃၇ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် Nielson Airportလေဆိပ်မှ ၄၂ ဟက်တာ (၄,၅၀၀,၀၀၀ စတုရန်းပေ)အကွာတွင် မနီလာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေကြောင်း အဆောက်အဦးကို ဖွင့်လှစ်ကာ မြို့၏ အဓိကလေကြောင်း ဝင်ပေါက်ဖြစ်လာသည်။
၁၉၅၄တွင် လေဆိပ်၏ နိုင်ငံတကာ ပြေးလမ်းနှင့် လေယာဉ်ချဉ်းကပ်ပြေးလမ်းတို့ကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်။၁၉၅၆တွင်လေကြောင်းထိန်းမျော်စင်နှင့် နိုင်ငံတကာခရီးသည်များအတွက် လေဆိပ်အဆောက်အဦး ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။
၁၉၆၁ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၂၂ရက်တွင် အဆောက်အဦးအသစ်ကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။၁၉၇၂ ဇန်နဝါရီ ၂၂တွင် မူလ အဆောက်အဦး မီးစွဲလောင်ခဲ့သည်။ ထိုနှစ်တွင်ပင်  ထိုနေရာ၌ အနည်းငယ်သေးသော အဆောက်အဦး အသစ် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
ထို အဆောက်အဦးမှာ တိုင်းပြည်၏ နိုင်ငံတကာလေကြောင်းခရီးစဉ် အဆောက်အဦးအဖြစ် ၁၉၈၁ခုနှစ်အထိ သုံးစွဲခဲ့သည်။ ယခုလက်ရှိ အဆောက်အဦး၁ကို ထိုစဉ်က ဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့၍ ထိုအဆောက်အဦးကို ပြည်တွင်းခရီးစဉ်များ အတွက်သာ သုံးစွဲခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၁၉၈၅ မေလတွင် ဖြိုချခဲ့သည်။
၁၉၈၃ ဩဂုတ်လ ၂၃ရက်နေ့တွင် Benigno "Ninoy" Aquinoသည် ထိုစဉ်က ဂိတ်နံပါတ် ၈တွင် လုပ်ကြံခံခဲ့ရသည်။
၄နှစ်အကြာတွင် သူ့အား အောက်မေ့ဖွယ်အဖြစ် လေဆိပ် အမည်ကို ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
လေဆိပ် အဆောက်အဦး ၁[ပြင်ဆင်ရန်]
ဖိလစ်ပိုင် လေကြောင်းလိုင်းမှ လေယာဉ်
ဖိုင်:စင်ကာပူ လေကြောင်းလိုင်းမှ လေယာဉ်
ဖိုင်:NAIA Terminal 1 Jan 2018.jpg
လေဆိပ် အဆောက်အဦး ၁
လေဆိပ်အဆောက်အဦး ၁ ( NAIA-1)သည် ၆၇,၀၀၀ စတုရန်း မီတာ (၇၂၀,၀၀၀ စတုရန်းပေ) ရှိပြီး ၁၉၈၁ခုနှစ်တွင် ပြီးစီးခဲ့ကာ လေဆိပ်အဆောက်အဦး ၄ပြီးနောက် ဒုတိယသက်တမ်းအရင့်ဆုံး အဆောက်အဦးဖြစ်သည်။ အဆောက်အဦး ဒီဇိုင်းအရ နှစ်စဉ် ခရီးသည် ၄.၅သန်းကို ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်သော်လည်း ခရီးသည် ၆သန်းအထိ ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန် တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ဤ အဆောက်အဦးတွင် နိုင်ငံခြား ခရီးစဉ်များကို ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိသည်။ ဖိလစ်ပိုင် လေကြောင်းလိုင်း၏ ကနေဒါ၊ နယူးယောခ်၊ ဒူဘိုင်းမှလွဲ၍ အရှေ့အလယ်ပိုင်း ခရီးစဉ်များအတွက် ဤ အဆောက်အဦးကို အသုံးပြုသည်။အသေးစိတ် ဒီဇိုင်းများကို ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရမှ ၁၉၇၄ခုနှစ်တွင် ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (ADB)က ၁၉၇၅ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၈ရက်နေ့တွင် အတည်ပြုခဲ့သည်။၁၉၇၈ခုနှစ်တွင် လုပ်ငန်းများ စတင်ခဲ့သည်။၁၉၈၉ခုနှစ်တွင် မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းအရ အဆောက်အဦး ၂နှင့် ၃ကို တည်ဆောက်ရန်နှင့် အခြား ပစ္စည်းများ ဆောက်လုပ်ရန် အကြံပြုခဲ့သည်။ အစိုးရ၏ အမိန့်ကြေညာစာအမှတ် ၃၈၁တွင် မနီလာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၏ တိုးတက်ရေးများအတွက် လုပ်ငန်းများအား အတည်ပြုခဲ့သည်။ ၁၉၇၃ခုနှစ်တွင် အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှ ချေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၉.၆သန်းဖြင့် ဖြစ်နိုင်ခြေတွက်ချက်ထားသော မဟာဗျူဟာ ပြီးဆုံးခဲ့သည်။ မနီလာလေဆိပ် ဖွံ့ဖြိုးရေး အသေးစိတ်စီမံကိန်းကို Renardet-Sauti/Transplan/F.F. Cruz Consultant မှ တာဝန်ယူပြီး အသေးစိတ် ဗိသုကာပုံစံကို Leandro Locsin's L.V. Locsin နှင့် ဆက်စပ်သူများမှ တာဝန်ယူသည်။
လေဆိပ် အဆောက်အဦးအနေဖြင့် ၁၉၉၁ခုနှစ်တွင် ၎င်း၏ ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည့် အမြင့်ဆုံး ခရီးသည်ဝန်ဆောင်မှုသို့ရောက်ခဲ့သည်။ ထိုနှစ်တွင် ခရီးသည် ၄.၅၃သန်း ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။၁၉၉၁ခုနှစ်မှစ၍ ဤလေဆိပ်အဆောက်အဦးမှာ ၎င်း၏ အမြင့်ဆုံး ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည့်ဦးရေထက် များပြားလာသည်။ အချက်အလက်များအရ နှစ်စဉ် ပျမ်းမျှ ၁၁%တိုးတက်နေသည်။ သို့သော် တည်ဆောက်ခဲ့သော ဖွံ့ဖြိုးမှုများအရ ခရီးသည် ၆သန်းကိုနှစ်စဉ် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည်။ အာရှရှိ အခြား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်များ၏ ပြည်ပဆိုက်ရောက်ထွက်ခွာအဆောက်အဦးများနှင့်စာလျှင် အနိမ့်ဆုံးအဖြစ် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ အကြောင်းမှာ သက်တမ်းလွန် ခေတ်မမီတော့သော ပစ္စည်းများ၊ ခရီးသည်များ ကြန့်ကြာခြင်းနှင့် ပြည့်ကျပ်နေခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။  ခရီးသွား ဝက်ဆိုဒ်ဖြစ်သော The Guide to Sleeping in Airports၏ ဖော်ပြချက်အရ ၂၀၁၁ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ခုနှစ်အထိ အဆောက်အဦး၁မှာ ကမ္ဘာနှင့် အာရှ၏ အဆိုးဆုံးလေဆိပ် စာရင်းဝင်ခဲ့သည်။ ဤကိစ္စနှင့် ပက်သက်၍ ပို့ဆောင်ရေး အာဏာပိုင်များက အဆောက်အဦး၁၏ ပြဿနာများကို ရှာဖွေခဲ့သည်။ ထိုပြဿနာနှင့် အဆင့်မြှင့်တင်မှုများတွင် ဆိုက်ရောက် ဧရိယာ တိုးချဲ့ခြင်း၊ ပါကင်နေရာများ တိုးချဲ့ခြင်း နှင့် အခြား အဆောက်အဦး ဆိုင်ရာများကို မြှင့်တင်ခဲ့သည်။
ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက အဆောက်အဦး၃ပြီးပြီးချင်း အဆောက်အဦး၁ကို ဆီဘူးပစ်ဖိတ်လေကြောင်းလိုင်း၏ အထူးအဆောက်အအုံနှင့် လေကြောင်းမြို့တော်အဖြစ် ရည်ရွယ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။
၂၀၁၄ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၄ရက်နေ့တွင် ၃၂နှစ်ကြာမြင့်ပြီဖြစ်သော အဆောက်အဦး၁ကို ပြန်လည် မွန်းမံကာ ၂၀၁၅ မေလတွင် အပြီးသတ်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့သည်။ အဆင့်၆ဆင့်ခွဲခြားခဲ့ပြီး ၂၀၁၄ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ရက်နေ့တွင် ၄၀% ပြီးစီးခဲ့သည်။ ပြုပြင်မှုများတွင် BRBစနစ် အခြေထိုင်ခြင်း၊ အတွင်းဒီဇိုင်း ပြင်ဆင်ခြင်းများ ပါဝင်သည်။ နိုင်ငံတကာ လေကြောင်းလိုင်း၅ခုဖြစ်သော ဒယ်တာလေကြောင်းလိုင်း၊ KLM Emirates၊ စင်ကာပူ လေကြောင်းလိုင်း၊ ကသေပစိဖိတ် လေကြောင်းလိုင်းတို့သည် အဆောက်အဦး၃သို့ ပြောင်းသွားသည်။
လေဆိပ် အဆောက်အဦး ၂[ပြင်ဆင်ရန်]
အဆောက်အဦး ၂မှာ ဆန်တယ်နီယယ် အဆောက်အဦးဟုလည်း သိကြပြီး ၇၅,၀၀၀ စတုရန်း မီတာ (၈၁၀,၀၀၀ စတုရန်းပေ) ကျယ်ဝန်းကာ Old MIAလမ်းမပေါ်တွင် တည်ရှိသည်။၁၉၉၅ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ စတင်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၉ခုနှစ် မေလ ၁ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကာ ၁၉၉၉ခုနှစ်တွင် စတင်လည်ပတ်ခဲ့သည်။ဖိလစ်ပိုင်၏ လွတ်လပ်ရေး ကြေညာခဲ့သည့် ဆန်တယ်နီယယ် ခုနှစ်ကို ဂုဏ်ပြု မှည့်ခေါ်ထားသည်။ မူလက Aéroports de Parisမှ ပြည်တွင်းအဆောက်အအုံအဖြစ် သုံးစွဲရန် ရည်ရွယ်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံတကာ ခရီးစဉ်များအတွက်ပါ မွန်းမံခဲ့သည်။ နှစ်စဉ် ပြည်ပခရီးစဉ်အတွက် ခရီးသည် ၂.၅သန်း၊ ပြည်တွင်းခရီးစဉ်အတွက် ခရီးသည် ၅သန်း ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိသည်။ လိုအပ်လာလျှင် ခရီးသည် ၉သန်းအထိ ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန် ပြင်ဆင်ထားသည်။
အဆောက်အဦး၂ကို ဖိလစ်ပိုင်လေကြောင်းလိုင်း၊ PAL Express တို့မှ ပြည်တွင်းရော ပြည်ပအတွက်ပါ အသုံးပြုလျက်ရှိသည်။ အဆောက်အဦး၏ မြောက်ဘက်အခြမ်းကို ပြည်ပခရီးစဉ်များအတွက် အသုံးပြုပြီး တောင်ဘက်ပိုင်းကို ပြည်တွင်း ခရီးစဉ်များအတွက် အသုံးပြုသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် လေယာဉ်ပေါ်တက်ရန် တံတား ၁၂စင်းရှိသည်။ ကဖေးဆိုင်နှင့် စားသောက်ဆိုင်များစွာလည်းရှိသည်။ မြောက်ပိုင်းတွင် အခွန်လွတ် အရောင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်လည်းရှိသည်။
၁၉၈၉ခုနှစ်တွင် လေဆိပ်၏ မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းအရ အဆောက်အဦး၂ခုကို ထပ်မံတိုးချဲ့ရန် ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။၁၉၉၁ခုနှစ်တွင် ပြင်သစ်အစိုးရမှ ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကို ချေးငွေချေးခဲ့သည်။၁၉၉၂ခုနှစ်တွင် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း ပြီးဆုံးခဲ့ပြီး ၁၉၉၄ခုနှစ်တွင် ဂျပန်အစိုးရမှလည်း ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကို ချေးငွေ ဂျပန်ယမ်း ၁၈.၁၂ ဘီလီယံ ချေးခဲ့သည်။၁၉၉၅ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ရက်နေ့တွက် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ စတင်ခဲ့သည်။၁၉၉၈ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ရက်နေ့တွင် ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့သည်။၁၉၉၉ခုနှစ်တွင် လေဆိပ်လုပ်ငန်းများ စတင်လည်ပတ်ခဲ့သည်။
၂၀၁၄ခုနှစ်တွင် ဖိလစ်ပိုင် ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက အဆောက်အဦး၂၏ တိုးချဲ့ရေး စီမံကိန်းကို ကြေညာခဲ့သည်။ ထိုစီမံကိန်းတွင် အဆောက်အဦး၁နှင့် ၂အကြား ဆက်သွယ်မည့် အဆောက်အအုံလည်း ပါဝင်သည်။ထို့အပြင် အဆောက်အဦးဘေးရှိ အသုံးမပြုတော့သော ဖိလစ်ပင်းရွာ ဟိုတယ် ဖြိုဖျက်ခြင်းလည်း ပါဝင်သည်။ အဆောက်အဦး ၁နှင့် ၂ကြားရှိ ဆီလှောင်ကန်များကိုလည်း ဖြိုဖျက်လိုက်သော နေရာသို့ ပြောင်းရမည်ဖြစ်သည်။
လေဆိပ် အဆောက်အဦး ၃[ပြင်ဆင်ရန်]
အဆောက်အဦး ၃ (NAIA-3)သည် နနွိုင်း အာကွီနို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်၏ အကြီးဆုံးနှင့် အသစ်လွင်ဆုံး အဆေက်အဦးဖြစ်သည်။၁၉၉၇ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ စတင်ခဲ့သည်။ အဆောက်အဦး ၃ကို ၆၃.၅-ဟက်တာ (၁၅၇-ဧက)ပေါ်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့ကာ အဆောက်အဦး၏ ဧရိယာမှာ ၁၈၂,၅၀၀ စတုရန်း မီတာ (၁,၉၆၄,၀၀၀ စတုရန်းပေ) ဖြစ်ပြီး အရှည်မှာ ၁.၂ ကီလိုမီတာ (၀.၇၅ မိုင်)ရှိသည်။ လေးထပ်အမြင့်ရှိ ဈေးဝယ်စင်တာမှာ အဆောက်အဦးနှင့် ပါကင် အဆောက်အအုံကို ဆက်သွယ်ထားသည်။ ပါကင် အဆောက်အအုံမှာ ကားအစီးပေါင်း ၂၀၀၀ဝင်ဆံ့ကာ ပြင်ပ ကားပါကင်မှာ ၁၂၀၀ဝင်ဆံ့သည်။ အဆောက်အဦး ၃မှာ နေ့စဉ် ခရီးသည် ၃၃၀၀၀၊ တစ်နာရီလျှင် ခရီးသည် ၆၀၀၀ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည်။  ၂၂၀မီတာရှည်လျားပြီး ၂၀၁၇ခုနှစ် ဧပြီလတွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော တံတားမှာ အဆောက်အဦးနှင့် Newport Cityကို ဆက်သွယ်ပေးထားသည်။ ထိုတံတားတွင် အလိုအလျောက် ရွေ့လျားစက်များ ပါဝင်ကာ လူ၂၀၀၀ခန့် ဖြတ်သန်းနိုင်သည်။ 
၎င်း၏ လေယာဉ် ဆိုက်နားရာနေရာသည် ၁၄၇,၄၀၀ စတုရန်း မီတာ (၁,၅၈၇,၀၀၀ စတုရန်းပေ) ကျယ်ဝန်းသည်။ လေယာဉ်ပေါ်တက်ရန် jet bridge ၃၄စင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဂိတ် ၂၀မှာ လေယာဉ် ၂၈စင်းကို တစ်ပြိုင်နက် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည်။ လေကြောင်းအချက်အလက် အလုံး၇၀၊မော်နီတာ ၃၁၄လုံးရှိသည်။
ထွက်ခွာဆောင်တွင် နောက်ဆုံး လုံခြုံရေးစစ်ဆေးရန် X-rayစက် ၁၈လုံးရှိသည်။
၂၀၀၈ခုနှစ် ဇူလိုင် ၂၂ရက်နေ့တွင် ပြည်တွင်း ခရီးစဉ်အနည်းငယ်အတွက် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။PALလေကြောင်းမှလွဲ ၍ ကျန်ရှိနေသော နိုင်ငံတကာ လေကြောင်းလိုင်းများသည် အဆောက်အဦး၃သို့ ရွေ့ရန် ရည်ရွယ်ထားသည်။
နနွိုင်း အာကွီနို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်၏ လေဆိပ် အဆောက်အဦး၃
လေဆိပ် အဆောက်အဦး ၄ (ပြည်တွင်း ခရီးစဉ်များ အဆောက်အဦး)[ပြင်ဆင်ရန်]
အဆောက်အဦး၄ ကို မနီလာ ပြည်တွင်းခရီးသည် အဆောက်အဦးဟု ခေါ်ကြသည်။ လက်ရှိအချိန်ထိ ပြည်တွင်းအဆောက်အဦးဟောင်းဟု သိကြပြီး ၁၉၄၈ခုနှစ်က တည်ဆောက်ခဲ့ကာ လေဆိပ် အဆောက်အဦး၄ခုအနက် သက်တမ်းအရင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းလေကြောင်း ခရီးစဉ်များသာ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။ လေယာဉ်ပေါ်တက်ရန် jet bridgeမရှိဘဲ ဘတ်စ်ကားဖြင့်သာ သွားနိုင်သည်။ ချက်အင် ကောင်တာ ၂၆ခုရှိသည်။ ထွက်ခါဆောင်တွင် တစ်ချိန်ထဲတွင် ၉၆၉ယောက်စာ ထိုင်ခုံရှိသည်။
လေဆိပ်၏ အဓိကပြေးလမ်းမှာ 061°/241° (06/24) ၃,၇၃၇ မီတာ (၁၂,၂၆၀ ပေ) အရှည်ရှိ လေယာဉ်ပြေးလမ်းဖြစ်သည်။ ပြေးလမ်း 13/ 31မှာ ယခင် USAF၏ ပြေးလမ်းဖြစ်သည်။
တတိယ ပြေးလမ်း စီမံကိန်း[ပြင်ဆင်ရန်]
ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အဆိုပြုချက်အရ လက်ရှိ 6/24နှင့် ကပ်လျက်တွင် ပြေးလမ်းအသစ်တစ်ခု လျာထားသည်။ အဆိုပါပြေးလမ်းမှာ ၂,၁၀၀ မီတာ (၆,၉၀၀ ပေ) ရှည်လျားပြီး လေဆိပ်၏ လေယာဉ်အဆင်းအတက်ကို တစ်နာရီလျှင် အစင်း၄၀မှ ၆၀-၇၀အထိ မြင့်တက်စေနိုင်သည်။သို့သော် အစိုးရအကြံပေးများအရ ပြေးလမ်းအသစ်တည်ဆောက်ခြင်းမှာ လက်ရှိအဓိကပြေးလမ်းကို ထိခိုက်စေနိုင်ပြီး အနှောင့်အယှက်နည်းစေရန်အတွက် အခြား လေဆိပ်အဆောက်အဦးအသစ်သာ ဆောက်သင့်သည်ဟုဆိုသည်။
မနီလာလေဆိပ်အာဏာပိုင်အဖွဲ့မှ လေဆိပ်အဆောက်အဦး ၄ခုအကြားတွင် ဘတ်စ်ကားများ ပြေးဆွဲပေးနေသည်။ ထို့ကြောင့် အဆောက်အဦးတစ်ခုမှ ဆိုက်ရောက်ပြီးလျှင် အခြားခရီးစဉ်တစ်ခုသို့ ထွက်ခွာရန်အတွက် လွယ်ကူစွာ သွားလာနိုင်သည်။နေ့ခင်းအချိန်များတွင် ၁၅မိနစ်တစ်ခါထွက်ခွာပြီး ထိုဘတ်စ်ကားများကို အသုံးပြုရန် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အခွန်ကိစ္စများကို ရှင်းလင်းအောင် ဆောင်ရွက်ထားရသည်။
မက်ထရို မနီလာ၏ ဒေသပေါင်းစုံမှ ဘတ်စ်ကားလမ်းကြောင်း၉ခုနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။Ultimate Bus Experience (UBE Express)သည် လေဆိပ် အဆောက်အဦးများနှင့် မနီလာ၊ မာကတီ၊ ပါစီ၊ ပါရာနပ် စသည့် မြို့များရှိ ဟိုတယ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးထားသည်။
ဒေသတွင်း အနီရောင်ဂျစ်ကားများဖြစ်သည့် jeepney များသည် ပါရာနပ်နှင့် ပါစီမြို့များသို့ လမ်းကြောင်းများဖြစ်သည်။
with the elevated roads above leading to the airport]]
လေဆိပ်သို့ Baclaran Manila LRT Line 1ဘူတာရုံ၊Nichols PNRဘူတာရုံများဖြင့် ဆက်သွယ်ထားသည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်ကောင်စီ (ACI)၏ အချက်အလက်များအရ အောက်ပါဇယားမှာ မနီလာလေဆိပ်၏ ခရီးသည် ဝင်ရောက်မှု အချက်အလက်များဖြစ်သည်။.
2003 12,955,809 81
2004 15,186,521 17.2% 75 ( 6)
2005 16,216,031 6.8% 77 ( 2)
2006 17,660,697 8.9% 73 ( 4)
2007 20,467,627 15.9% 64 ( 9)
2008 22,253,158 8.7% 57 ( 7)
2009 24,108,825 8.3% 51 ( 6)
2010 27,119,899 12.5% 49 ( 2)
2011 29,552,264 9.0% 46 ( 3)
2012 31,878,935 7.9% 45 ( 1)
2013 32,865,000 3.1% 45 ( )
2014 34,015,169 3.5% 49 ( 4)
2015 36,681,601 7.84% 49 ( )
2016 39,516,782 7.72% 47 ( 2)
2017 42,022,484 5.96% 44 ( 3)
2009 114,510.68 137,454.13 251,964.81 50,694.88 46,334.56 97,029.44
2010 143,476.06 164,439.40 307,915.46 62,762.91 54,704.34 117,467.25
2011 139,901.34 150,603.97 290,505.31 57,862.02 62,009.72 119,871.74
2012 148,822.59 162,232.63 311,055.22 71,402.63 77,677.30 149,079.93
2013 93,159.95A 99,684.77A 192,844.72 39,244.25B 47,407.90B 86,652.15
^A : Data recorded is from January to August 2013
^B : Data recorded is from January to July 2013
↑ Creating the Manila International Airport Authority, Transferring Existing Assets of the Manila International Airport to the Authority, and Vesting the Authority with Power to Administer and Operate the Manila International Airport။ President of the Republic of the Philippines။ Republic of the Philippines။ 14 October 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Manila's International Airport: Gateway to the world။ Philippine Star (November 10, 2001)။
↑ Sarasota Herald-Tribune - Google News Archive Search။ google.com။
↑ TERMINAL 1 Archived October 14, 2007, at the Wayback Machine.
↑ Several PAL Mid-East flights to transfer to T1။ Philippine Airlines (June 27, 2017)။ 21 August 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ LN0164-PHI: Manila International Airport Development။ Asian Development Bank။
↑ Reviews of Manila Ninoy Aquino Airport with Passenger reviews about Manila Ninoy Aquino Airport standards airlinequality.com.
↑ "NAIA no longer on worst airports list"၊ The Philippine Star၊ October 19, 2017။
↑ PNoy okays P1.16B budget for NAIA-1 facelift။ ABS-CBN News and Current Affairs (January 2, 2012)။
↑ Cebu Pacific eyeing 'Airport City'--DoTC။ Philippine Daily Inquirer (November 11, 2007)။
↑ NAIA-1 rehab underway။ The Philippine Star (January 24, 2014)။ 11 August 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ NAIA Terminal 1 fully rehabilitated and operational by May 2015 - Abaya။ InterAksyon.com (December 17, 2014)။ 20 December 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Farolan mistaken; Ramos pushed airport dev’t။ Philippine Daily Inquirer (May 9, 2011)။
↑ ၁၄.၀ ၁၄.၁ Ninoy Aquino International Airport, Philippines။ Airport Technology။
↑ Ninoy Aquino International Airport Terminal 2, Philippines။ 27 June 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ DOTC eyes interconnecting NAIA terminals 1 and 2။ Rappler (August 1, 2014)။ 22 November 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Gov’t mulls over Naia Terminal2expansion။ Philippine Daily Inquirer (August 2, 2014)။
↑ P1.3-B NAIA 1 rehabilitation awarded to D.M. Consunji။ Manila Bulletin (December 23, 2013)။ 20 August 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ "Sign of progress"၊ Manila Bulletin၊ April 18, 2017။
↑ Another Runway planned for Ninoy Aquino International Airport။ Philippine Flight Network (May 16, 2014)။
↑ New NAIA Runway Construction Begins။ Philippine Flight Network (May 23, 2014)။
↑ Gov’t eyeing another NAIA terminal။ BusinessMirror (December 16, 2014)။
↑ Airport Shuttle Service။ Manila International Airport Authority။5March 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Airport Council International Archived January 3, 2009, at the Wayback Machine..
↑ 2012 Airport Traffic Report။ The Port Authority of NY&NJ။ 13 June 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ NAIA passengers inch up 3.1% to 32.86M in 2013။ philstar.com။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နနွိုင်း_အာကွီနို_အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ_လေဆိပ်&oldid=727909" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၂၂:၀၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။